Nhau DzeBonde Archives - Page 3 of 12 - Nhau Dzevakuru
Ndakaramba ndichibairira mboro kumberi kusvika ndakunzwa akugomera nekunakirwa! Ndakasvira kababe kubasa after meeting kakafamba kachiudza vanhu nezvemboro yangu saka Alice is now interested in feeling mboro yangu. Takataurirana ndokuwirirana kuti ndaizomufonera ndava kumba. Ndamufonera nhasi...
Max - January 2, 2019
Ndakabatwa ndichisvirwa nechikomba kanight dress kari muchiuno! Sha this Friday ndakabata yakapenga. Iko zvino ndabvuma kuti ndazova hure chairo more than zvaunoziva zviye. Ndakazvibatira mhene chaiyo rinosevenzera NGO. Mwana akabatana iyeye. Kungomutarisa so ndinobva...
Mboro yakazonzi musoro shweee vachibva vanyemwerera zvavo zvikanzi I love beche riri tight. Zvakazoitika nezuro, kubva makuseni ndaingonzwa kuda mboro ndokufonera muface wangu kuti auye mutown iye kwakunditora kuyenda neni muchicken inn. Ndingasvirirwe muchicken...
Max - December 29, 2018
Vakandisvira kusvika ndatunda futi and when he said ivo vakuda kutunda I had my legs locked around kumusana kwavo. I made a decision and ndokusiya manager vachitundira mukati mangu. Vachidzupura mboro yavo all types...
Tete Vee - December 29, 2018
Masviriro andakaita maid wemazigaro ainyanya kugara asina kupfeka bhurugwa! Chokwadi shuwa mukadzi uyu aive muyedzo. From day one ndakaona kuti uyu babe uyu anga ana SATAN chaiye mukai make because i could tell kuti...
Max - December 28, 2018
First time yangu kusvirwa nevarume three, ndaingoona Mboro yakamira kwese kwandaitarisa!Zvakatanga ndayenda kumba kwa Max. It was ini, Max na Tendai. This was going to be the first time yangu kusvirwa nevarume three. Ndakanga...
Nyoro naManager wepaLodge pataigara while Hubby Sleeps. This is a story of how I cheated for the first time and funny enough I had no regrets. We had planned this holiday for months and...
Tete Vee - December 27, 2018